Ngabe Usethe Amapharamitha kuma-Webmasters? | Martech Zone
Ngabe Usethe Amapharamitha kuma-Webmasters?
NgoLwesihlanu, Septhemba 24, 2010 NgoMsombuluko, Okthoba 20, 2014 Douglas Karr
Kuleli sonto, bengibukeza amasayithi amaklayenti ngisebenzisa amathuluzi we-webmasters. Okunye kokungaqondakali okukubonile ukuthi ukuxhumana okuningi kwangaphakathi kusayithi kunamakhodi womkhankaso anamathiselwe kuwo. Lokhu bekukulungele iklayenti, belikwazi ukulandelela ikholi ngayinye yokwenza kwabo (i-CTA) kuyo yonke indawo. Akukuhle kangako nge-Search Engine Optimization, noma kunjalo.
Inkinga ukuthi iGoogle (injini yokusesha) ayazi ukuthi iyini ikhodi yomkhankaso. Kumane kukhomba ikheli elifanayo kusayithi lakho njengama-URL ahlukile. Ngakho-ke uma ngine-CTA esizeni sami engishintsha ngaso sonke isikhathi ukuhlola futhi ngibone ukuthi yini edala ukuguqulwa okuningi, ngingahle ngigcine ngokuthi:
Leli yikhasi elilodwa ngempela, kepha iGoogle ibona ama-URL amathathu ahlukile. Ukuxhumanisa kwangaphakathi kwesayithi lakho kubalulekile ngoba kutshela injini yokusesha ukuthi yikuphi okuqukethwe okubalulekile ngaphakathi kwesayithi lakho. Imvamisa, ikhasi lakho lasekhaya nokuxhumanisa kwe-1 kude nekhasi lakho lasekhaya kukalwa kakhulu. Uma unamakhodi womkhankaso amaningi asetshenziswe kuyo yonke indawo, iGoogle ibona izixhumanisi ezahlukahlukene futhi, mhlawumbe, ingabi nesisindo ngasinye njengoba kufanele.
Lokhu kungenzeka ngezixhumanisi ezingenayo ezivela kwamanye amasayithi futhi. Amasayithi afana ne-Feedburner afaka ngokuzenzakalela amakhodi womkhankaso we-Google Analytics kuzixhumanisi zakho. Ezinye izinhlelo ze-Twitter zengeza amakhodi womkhankaso (njenge I-TwitterFeed uma inikwe amandla). IGoogle inikezela ngezixazululo ezimbalwa kulokhu.
Enye indlela ukungena ngemvume ku- I-Google Search Console i-akhawunti kanye khomba amapharamitha lokho kungasetshenziswa njengamakhodi womkhankaso. Ngoba -Google Analytics, ihlelwe kanjena:
Ikhasi empeleni lizokutshela ukuthi yimiphi imingcele ebilokhu ibonwa kusayithi lakho, ngakho-ke kulula kakhulu ukuthola ukuthi lokhu kukuthinta noma cha. I-Google ithi:
Amapharamitha we-Dynamic (ngokwesibonelo, ama-ID eseshini, umthombo, noma ulimi) kuma-URL wakho angaholela kuma-URL amaningi ahlukene onke akhomba kokuqukethwe okufanayo. Isibonelo, i-http: //www.example.com/dresses'sid=12395923 ingahle ikhombe kokuqukethwe okufanayo ne-http: //www.example.com/dresses. Ungacacisa ukuthi ufuna i-Google inganaki amapharamitha athile angafika kwangu-15 ku-URL yakho. Lokhu kungaholela ekukhasheni okusebenza kahle nangama-URL ayimpinda ambalwa, ngenkathi kusizwa ukuqinisekisa ukuthi imininingwane oyidingayo iyagcinwa. (Qaphela: Ngenkathi iGoogle icubungula iziphakamiso, asiqinisekisi ukuthi sizoyilandela kuzo zonke izimo.)
Isixazululo esingeziwe ukuqinisekisa Izixhumanisi ze-Canonical kuhleliwe. Kuzinhlelo eziningi zokuphathwa kokuqukethwe, lokhu kuzenzakalelayo manje. Uma ungenayo i-canonical link element esizeni sakho, xhumana nomhlinzeki wakho we-CMS noma umphathi wewebhu ukuthola ukuthi kungani. Nayi ividiyo emfushane kuzixhumanisi ze-Canonical, ezamukelwa yizo zonke izinjini ezinkulu manje.
Qiniseka ukukwenza kokubili - awukwazi ukuqaphela kakhulu, futhi isinyathelo esingeziwe ngeke silimaze lutho!
Tags: abaphathi bewebhu be-googleGoogle +ukusebenzisa ngokugcwele injiniseomphathi wewebhusayithi
Douglas Karr Friday, September 24, 2010 Monday, October 20, 2014
I-Indiana: Imali Yokukhangisa Elinganisiwe Yomhlaba
Isizathu Sangempela Sokuqasha i-Social Media Guru